स्कुलबाट घर फर्किदा त्यो दिन किन एक्लै फर्किन् भागरथी ? सधै हिड्ने त्यो बाटोमा त्यो दिन के भयो तेस्तो ? आफ्नै दाई र ठुलाबुवाको बयान (भिडियो) – Dainik Samchar
February 10, 2021 444
काठमाडौ । भागरथी भट्टको घटनाले अहिले फेरी एक पटक सबैको शिर निहुरीएको छ । बुवाको निधन भएको ४५ दिन पनि नहुँदै १७ वर्षकी भागरथीको पनि ह त्या भयो । घटना परिचित व्यक्तिबाटै भएको हुनसक्ने केही क्लु फेला परेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।
भागरथीको दाई र ठूलो बुवो उनको संघर्षको कुरा सुनाएका छन् । केशव भट्ट बहिनी माथि भएको घटना थाहा पाएपछि अहिले घर फर्केका छन् । उनी भारत वैदेशिक रोजगारीमा गएको केही दिन मात्र भएको थियो । वुवाको निधन पछि घरको जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आएका कारण पैसा कमाउन भारत गएका थिए । दुई साता पनि नबित्दै उनी फेरी घर फर्किए ।
श्रीमान गुमाएको डेढ महिना नहुँदै एक्ली छोरी पनि गुमाउनु परेपछि भागरथीको आमाको आँशु रोकिएका छैनन् । उनले आफुलाई सम्हाल्न सकेकी छैनन् । प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन । तर प्रहरीले घटनास्थलमा फेला पारेको मोवाइलवाट फेला परेको ुक्लुु वाट परिचितवाटै घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । घटनामा संलग्नको धेरै नजिक पुगेको पनि प्रहरीले दावी गरेको छ ।
घटना बुधबार अपरान्ह ३ बजेतिर भएको प्रहरीको अनुमान छ । घटना अनुसन्धान गर्न एसएसपी जनक पाण्डेको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, केन्द्रीइ अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी र इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनको टोलीलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरिएको छ ।
सीआईबीबाट निर्मला पन्तको घटना अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुरमा रहेका डीएसपी पञ्चकुमार बाखुको टोलीलाई नै भागरथीको घटनाको छानबिनमा पनि खटाइएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार बुधबार भागरथीलाई केही कल आएको थियो तर उनले रिसिभ वा कलब्याक गरेकी थिइनन् । विद्यालयबाट निस्कँदा चार जना सँगै थिए तर घरमा आमा एक्लै रहेको भन्दै भागरथी छिट्टै घर पुग्ने गरी साथीहरुबाट छुटेर हिँडेकी थिइन् ।
Prevयहा सम्म आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ